Karaman’ny mpiasam-panjakana:NIAKATRA FITO ISAN-JATO -
AccueilRaharaham-pirenenaKaraman’ny mpiasam-panjakana:NIAKATRA FITO ISAN-JATO
Nahazo ny anjarany ny mpanao politika mpanohitra omaly nandritra ny fifampiarahabana ara-diplomatika sy ny andrim-panjakana teny Iavoloha. Nanao tsindrom-paingotra ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, mba hahatonga saina ny mpanohitra satria « betsaka ny fandrabirabiana, fanakiviana, fandemena ny saim-bahoaka tamin’iny fanatanterahana ny fivoriana an-tampon’ny Frankôfônia sy ny Comesa iny, tsy ho vita io fa raha vita aza dia hitondra henatra ho an’ny firenena sy ny vahoaka malagasy e ! sns… vavolombelona ianareo izao, fa tsy nampitsanga-menatra ny fandraisana an’iny fivoriana lehibe iny, tafarina ny hasin’ny maha firenena an’i Madagasikara, mihatsara ny fomba fijerin’ny any ivelany ny vahoaka malagasy », hoy ny nambarany. Tokony mba efa ho tonga saina ny mpanohitra satria araka ny nambarany dia « ny lalan’ny fampandrosoana no tokony hifaninanana fa tsy ny lalana mitondra any amin’ny fitotonganana. Tsy afaka misaraka amin’ny firenena Repoblikana ny adihevitra ary efa nosokafana ny varavaran’ny fihavanam-pirenena ka tokony hiditra amin’izany ny rehetra», hoy ihany izy. Ny Filoha Zafy Albert sy ny Filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry ihany moa no tsy tonga teny niampy an’ireo Depiote Mapar. Toa te hiteny ny Filohan’ny Repoblika hoe hambom-po diso toerana ihany ny azy ireo.
Nisaotra ny vahoaka
Nahatsapa ny filohan’ny Repoblika fa raha tsy teo ny fanohanan’ny vahoaka dia tsy ho vita ireny. Naneho fisaorana izy araka izany ary nilaza fa isaorana ianareo vahoaka fa naneho fahendrena, tsapa ny tohana sy toky avy aminareo vahoaka, mahay manavaka ny vary amin’ny tsiparifary ny vahoaka, fanamby lehibe no vita ary mahavita rehefa tena miaraka mandray andraikitra. Isika foana no miroaroa saina fa ny fianakaviambe iraisam-pirenena efa mahatoky ary efa vonona hanampy amin’ny fampandrosoana satria 10 miliara dolara no vola azo tany Parisy farany teo iny izany hoe avo roa heny amin’ny noheverina ny vola azo. Ny sehatra tsy miankina sy ny mpandraharaha no tena hahazo vahana betsaka amin’izany famatsiam-bola izany. Teo amin’ny sehatry ny fizahantany dia niakatra 20% ny mpizahatany tonga teto.
Hiova mafimafy ny hafainganam-pandeha
Nanolo-tanana antsika ny Bad, ny Banky iraisam-pirenena ny Vondrona eropeana, ny Banky eropeana. Mbola tsy nisy ny fitondrana ka nahafeno ny fepetram-pahombiazana tahaka izao teo amin’ny tantaran’ny firenena. Misy ny fanapahan-kevitra raisina amin’ny fampiasana ny volam-panjakana, iray amin’ireny ny fanampiana atao amin’ny Jirama, ny fanamaivanana ny fiainan’ny vahoaka noho ny fampiharana ny antsoina hoe « vérité de prix ». Ho mafimafy ny hafainganam-pandeha amin’ity taona ity satria efa eo ny enti-manana amin’ny fampandrosoana. Mikasika ny tontolo iainana dia nambaran’ny Filoha fa hisy ny Dinam-pirenena hiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetrandro. Hahazo fanampiana manokana ihany koa anefa ireo Kaomina izay manao ny ady amin’ny doro tanety, ny manao fambolen-kazo. Ny nandrasan’ny mpiasa kosa dia niakatra 7% ny karama amin’ity taona ity ary misy ny didim-panjakana avoaka momba ny fanalefahan-tsazy. Santionany tamin’ny zava-dehibe sy nisongadina tamin’ny kabarin’ny Filoham-pirenena ireo.
Manoloana ny fahatapatapahan’ny karama ho an’ny mpiasam-panjakana sasantsasany amin’izao fotoana izao, dia nanome fanazavana i Razafintsalama Ihanta Sahondra, Tale Jeneralin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fitantanana ara-bolan’ny mpiasam-panjakana (DGGFPE). Tahaka ny natao tamin’ny fanadiovana ny tao amin’ny ...Tohiny